संवैधानिक विवादका लागि गठित ‘एमिकस क्युरी’मा पहिलो पटक महिला समावेश - RoadMapNews
संवैधानिक विवादका लागि गठित ‘एमिकस क्युरी’मा पहिलो पटक महिला समावेश
RoadMap News	प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २३, २०७७ समय: ९:१७:५७
नेपालमा गठित एमिकस क्युरीमा लैंगिकताका विषयमा राय चाहिए महिलालाई समावेश गरिने भए पनि संवैधानिक र देशका लागि यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पहिलोपल्ट महिलालाई समावेश गरिएको छ । सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट गीता पाठक संग्रौला एमिकस क्युरीमा जाने तय भएको सर्वोच्च बार स्रोतले बतायो ।
उनी काठमान्डु स्कुल अफ लमा मानव अधिकार विषयको प्राध्यापन गर्छिन् । यसअघि बारले खगेन्द्र अधिकारीको नाम चयन गरेको थियो । तर, उनमा कोरोना देखिएकाले उनी आइसोलेसनमा छन् । ‘हामीले गीता पाठकको नाम चयन गरेका छौँ,’ सर्वोच्च बार स्रोतले भन्यो, ‘खगेन्द्रजी अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ । अदालत आउन पाउनुहुन्न । त्यसैले उहाँको स्थानमा गीताजीलाई पठाउँदै छौँ ।’
लामो समय अदालती अभ्यास गरेकी पाठक एक कार्यकाल बारको केन्द्रीय सदस्य पनि भएकी थिइन् । उनले प्रगतिशील प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । डेढ दशकभन्दा पनि अघि उपाध्यक्षमा उठे पनि पराजित भएकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा १४ मुद्दा विचाराधीन छन् । यसैमाथि राय लिन सर्वोच्चको पुस १० गतेको इजलासले पाँच सदस्यीय एमिकस क्युरी गठन गर्ने अदेश दिएको थियो । यसका लागि बार एसोसिएसनबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली चयन भएका छन् भने सर्वोच्च बारले पाठकसहित वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नाम सिफारिस गरेको छ ।
यसैबीच कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनको रजिष्टारमा प्रा.डा. शारदा थपलिया नियुक्त भएकी छिन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीको सिफारिसमा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रा.डा. थपलियालाई रजिष्टारमा नियुक्त भएकी हुन् । थपलियाले यसअघि विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपति र रजिष्टारको रुपमा काम गरिसकेकी छन् । गएको माघ १२ गते प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपतिको पदावधि सकिएपछि विश्वविद्यालयको रजिष्टार पद रिक्त थियो । रजिष्टार नहुँदा विश्वविद्यालयका दैनिक कामकाज प्रभावित बन्दै आएका थिए ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष प्रा.डा. कल्याणी मिश्र त्रिपाठी नियुक्त भएकी छिन् । विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवम् शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको सिफारिसमा कुलपति केपी शर्मा ओलीले उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । तीन सदस्यीय आयोगमा कुलपतिबाट नियुक्त अध्यक्षसहित दुई जना र एक जना लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी सदस्य रहने व्यवस्था छ । स्मरण रहोस् गएको साउन ५ गतेदेखि विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष पद खाली रहेको थियो ।